Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1310
Fandaharan’ny Kolo TV : ho vahin’ny « Ankitsimpo » i Beriziky sy Guy Rivo
Par Taratra sur 08/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Ho vahinin’ny fandaharana « Ankitsimpo » ao amin’ny Kolo TV, amin’ity anio ity ny praiminisitra teo aloha, Beriziky sy ny depiote Tim voafidy tao amin’ny boriboritany faha 5, Randrianarisoa Guy Rivo. Hiompanan’ny adi-hevitra : ny fanamboarana ny lalana mampifandray an’Ivato sy Antananarivo, mitentina 30 tapitrisa dolara, trosa amin’ny firenena sinoa, handraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia, ny volana novambra […]
Par Taratra sur 08/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Tsy mandeha amin’ny laoniny ny raharaham-pirenena, araka ny nambaran’ny filohan’ny PLD, Rabeharisoa Sahara, omaly. « Tsy hita ny tena fahaiza-mitantana. Tsy tanteraka ny fampanantenana ary tsy misy ny mangarahara eo amin’ny volam-bahoaka. Ohatra, avoahy ny marina momba ny andramena », hoy izy. Mahatsiro ho voailika ireo mpikamban’ny AV 7 sasany amin’ny tombontsoa tokony ho azon’izy ireo. Voalazan’izy […]
Hofidiana ny 23 mey ny ho mpikamban’ny HCDDED
Par Taratra sur 08/04/2016 Divers, NS Malagasy
Hotanterahina amin’ny 23 mey ho avy izao ny fifidianana izay ho solontenan’ny firaisamonina sivily ao amin’ny Filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED). Tapaka tamin’ny fivoriambe, notarihin’ny komity manokana vaovao mikarakara ny fifidianana, teny amin’ny minisiteran’ny Serasera, Nanisana, afakomaly izany. Efa misokatra ary hifarana ny 14 avrily ny fametrahana antontan-taratasy […]
Tompon’ny teny farany ny eny Tsimbazaza…. Amin’ny mety hanovana ny governemanta na tsia. Andrasana ny ho fahendren’izy ireo manoloana ny mety ho tsindry na koa faneriterena samihafa. Eo koa ny fahatsapan-tenany noho ireo depiote, nametrahan’ny vahoaka ny fitokisany sy misolo vava azy. Iaraha-mahalala rahateo izao fahantrana lalina iainan’ny vahoaka izao. Ny olana eo amin’ny sehatra […]
Namaly ireo fitakiana ataon’ny sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja sy ny mpiraki-draharaha ny minisitry ny Fitsarana omaly. Nambarany fa efa eo am-pandinihana ny momba ireo fitakiana, ary efa nisy ny efa voadinika sy nikaroham-bahaolana taloha, saingy mbola eo am-piandrasana ny valiny. Milaza ho sahirana ara-bola ihany koa ny minisitera ka misy amin’ireo fitakiana hafa tsy ho voavaly. […]
Par Taratra sur 08/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tsy nisy indrafo fa nitondra ireo polisy kaominaly sy ny vondron’ny mpamono afo nandrava ireo trano miorina tsy ara-dalàna sy nandoro ny tranon’ireo 4Mi eo amoron-dranomasina ao Toamasina, omaly ny Ben’ny tanànan’i Toamasina Ratsiraka Elysé… Tafiditra ao anatin’ny fanadiovana ny morontsirak’i Toamasina ary koa paikady hanafoanana ny fialofan’ireo jiolahy sy tontakely mpanendaka eny amoron-dranomasina izao […]
Mila mitokana ny vita, mila mitokona ho hita…
Par Taratra sur 08/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tena miasa sy mahavita zavatra ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao? Mampiady hevitra izay, tsy mampitovy fijery, hifandroritana aza… Arakaraka ny toerana misy ny tena io, izay heverina ho zava-dehibe sy maika, izay kendrena amin’izany. Ny itsitokotokoan’ny loha, hono, samy manana ny heviny. Na izany aza, eo ny vahoaka mitsara: tafapaka amin’ny fiainany andavanandro ny fanarenam-pirenena […]
Tsenan’Anosibe : mirongatra ny aretim-pivalanana noho ny loto
Fantatra omaly tetsy amin’ny BMH Isotry araka ny nanambaran’ny dokotera Durand Dérys lehiben’ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamam-bahoaka sy ny “hygiène” mikasika ny valin’ny fitiliana izay natao teny amin’ny laboratoana tsy miankina fa misy karazana aretim-pivalanana miparitaka, vokatry ny loto eny an-tsena. Misy ny valanaretim-pivalanana vokatry ny loto ao amin’ny tsenan’Anosibe. Voaporofo tamin’ny alalan’ny fitiliana nataon’ny […]
Ambohimamory Ampitatafika : voasambotry ny polisy i Voangory sy ny namany
Nidoboka am-ponja avy hatrany rehefa avy natolotra ny fampanoavana i Voangory sy ny namany rehefa avy natolotra ny fampanoavana, omaly. Saron’ny polisy avy ao amin’ny poste de police Loharanombato Ampitatafika, ny talata sy alarobia maraina teo, ny jiolahy efatra izay malaza ratsy amin’ny fanendahana eny Ambohimamory Ampitatafika. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny polisy ao Loharanombato, ny […]
Hanampy antsika hisarika mpampiasa vola ny Sinoa
Anisan’ny sehatrasa folo iarahana miasa amin-dry zareo sinoa ny fanabeazana sy ny fambolena ary koa ny fanorenana fotodrafitrasa. Tsy hijanona eo anefa izany, araka ny nambaran’ny ambasadaoron’ity firenena ity eto amintsika, Yang Xiaorong. « Eo koa ny hijerena ny lalàna mba ahafahan’ny teratany vahiny mampiasa vola eto. Tokony hohamoraina izany. Fa eo koa ny fiaraha-miasa hametrahana […]
Vangaindrano : mpamaky fasana matin’ny fitsaram-bahoaka
Olona telo indray matin’ny fitsaram-bahoaka tao amin’ny fokontany Befeno Vangaindrano, ny talata teo. Voarohirohy ho namaky fasana ireto olona ireto ka izao tsy namelan’ny fokonolona izao raha tsy matin’ny fitsaram-bahoaka. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, olona efatra izy ireo no voarohirohy ho namaky fasana ka nosamborin’ny fokonolona miisa 300 lahy. Raikitra ny fifanenjehana ka […]
Mpanao fanafihana nisesy teto an-dRenivohitra : voasambotry ny UIR ireo 5 mirahalahy, saika niharan’ny hatezeram-bahoaka
Par Taratra sur 08/04/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Ravan’ny polisy sy ny fokonolona ny andian- jiolahy mpanafika eto an-dRenivohitra. Dimy lahy indray voasambotra, izay vao avy nanesy trano telo teny Ivandry, ka anisan’izany ny tranon-dRavololomanana Lalatiana. Mpirahalahy avokoa ireto dimy lahy voasambotry ny polisin’ny UIR teny Ambodivoanjo Ivandry, ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 1 ora maraina. Voalazan’ny polisy fa jiolahy mpanao […]
Fort Dauphin : mihetsika ny Hoavinign’Anosy Miatriky
Par Taratra sur 07/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Mivondrona ao anatin’ny fikambanana Hoavinign’Anosy Miatriky ireo zanak’i Fort Dauphin miparitaka manerana ny Nosy, hatrany ampitan-dranomasina. Mikendry ny fampandrosoana ho an’ny distrikan’i Fort Dauphin izy ireo. Ho an’ity taona ity hisy ny fanangonam-bola hanohanana ara-tsosialy ny olona any amin’ny faritra Androy izay misy ity distrika ity ka tratran’ny krizy ara-tsakafo vokatry ny haintany mivaivay. Manampy […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe 2016» : nandresy fa tsy mbola afaka ny FC Barcelone
Par Taratra sur 07/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Mbola saro-pantarina izay ho tafavoaka eo amin’ny FC Barcelone sy ny Atletico de Madrid, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra. Fandresena tamin’ny elanelan’isa kely mantsy no azon-dry Messi sy ry Neymar. Tsy mbola afaka misioka ny FC Barcelone, eo amin’ny fiadiana ny “Ligue des champions d’Europe”, taranja baolina kitra. Tamin’ny […]
UTOP 2016 : hisy mpifaninana frantsay handray anjara
Par Taratra sur 07/04/2016 Divers, NS Malagasy
Hotanterahina ny 6 ka hatramin’ny 8 may ho avy izao, ny andiany fahavalo amin’ny “Ultra Trail des Ö plateau à Madagascar” na ny (Utop). Anisan’ny hampiavaka ity andiany ity, ny fisian’ireo mpifaninana avy any ivelany, toa an-dry zareo Frantsay sy Renioney, izay efa zatra mandray anjara amin’ny hazakazaka UT4M, atao any Grenoble sy ny Trail […]
Ho fampiroboroboana sy ho fampandehanana tsara ny taranja basikety eny anivon’ireo ligim-paritra, nanolotra fitaovana ho azy ireo ny federasiona malagasy (FMBB). Araka izany, ligim-paritra ligim-paritra telo no voasafidy nahazo ireo fitaovana ireo tamin’ity. Nahazo baolina fanaovana fifaninanana miisa 15 avy ny ligin’Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany raha “tableau éléctronique” kosa ny an’ny ligin’i Bongolava. Marihina […]
Fampianarana : mila mianatra ny ankizivavy
Nanaporofo ny banky iraisam-pirenena fa misongadina ny fandrosoan’ny firenena iray rehefa betsaka ny vehivavy mahavita fianarana hatramin’ny ambaratonga faharoa ary mandray anjara amin’ny asa fampandrosoana ny fireneny. Mbola betsaka anefa ny firenena, indrindra ireo andalam-pandrosoana, anisan’izany i Madagasikara tsy mahavita ny ambaratonga faharoa ny ankizivavy ao aminy. Antony maro no mahatonga izany. Misy ny paikady […]
Ankatso II : «Tsy azo ovaina ny hofan-trano 50 000 Ar»
Ny fivorian’ny mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantanan’ny CrouA tamin’ity taona ity no nanapaka ny sora-bola 50 000 Ar ho saran’ny fipetrahana amin’ny efitrano vaovao ho an’ny mpianatry ny oniversite eny Ankatso II, mandritra ny taona iray. Tsy afaka manova velively io fanapahan-kevitra io ny talen’ny CrouA, Randriamiarinarivo Abel, araka ny nambarany omaly. Amin’ny mpianatra 608 tokony hipetraka […]
Ho avy indray ny vaksiny polio
Hatomboka amin’ny 13 avrily izao, etsy Sabotsy Namehana , distrikan’Avaradrano, faritra Analamanga indray ny vaksiny andiany fahavalo hiadiana amin’ny aretina lefakozatra eto Madagasikara. Tsy hifarana ny hetsika raha tsy ny 16 avrily izay kendrena hahavitana vaksiny ireo ankizy rehetra latsaky ny dimy taona. Fotoana farany hampiasana ilay vaksiny (tOPV) io amin’ny herinandro io. Tsy nisy […]
Hetsika maro no hotontosaina : hisokatra anio ny « Taona teatraly 2016 »
Par Taratra sur 07/04/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Mahavelom-bolo ny tetikasa entina hanomezana aina vao ny teatra eto Madagasikara. Raha tontosa izany, hamokatra ny “Taona teatraly 2016”, izay hanomboka anio. Ny 27 martsa no andro eran-tany ho an’ny teatra. Raha ny tokony ho izy, mifanandrify amin’izay hatrany koa ny fanokafana ny taona teatraly. Noho io daty io nifanindry tamin’ny fetin’ny Paka anefa, voatery […]
Lasa lavitra… : handray anjara amina hetsika lehibe roa ny The Dizzy Brains
Tetezana iray nampita an-dry The Dizzy Brains, tarika ivondronana tanora efatra mirahalahy miangaly ny mozika punk rock, ny Libertalia Music Records. Taorian’ny hetsika « Transmusicales » tany Rennes, handray anjara amina hetsika lehibe roa, samy mbola any Frantsa, ity tarika ity. Handray azy ireo voalohany ny « Printemps de Bourges », andiany faha-40, izay hatao ny 12 hatramin’ny 17 […]
Is’Art Galerie – Sophie Bazin : haneho ny “Firahalahiana” an-tsary
« Fraternité », azo adika ihany koa hoe « Firahalahiana ». Io no lohatenin’ny fampirantiana hosodoko, misokatra ho an’ny besinimaro etsy amin’ny Is’Art Galerie La Teinturerie etsy Ampasanimalo, ny 7 hatramin’ny 30 avrily izao. « Firahalahiana », lohahevitra nosafidin’i Sophie Bazin, mpanakanto fantatra amin’ny sokajy maromaro vahiny saingy mankafy ary mahatsapa tsara ny hakanton’i Madagasikara, ny tontolo sy ny mponina ao […]
Praiminisitra Ravelonarivo : “Tsy hametra-pialana aho”
Par Taratra sur 07/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Mbola mahabe adihevitra ny amin’ny fifandraisan’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra. Nilaza ny lehiben’ny governemanta fa tsy hametra-pialana… “Averiko fa mbola tsy nametra-pialana aho, ary tsy hametra-pialana? Angamba, mazava izay… Lalàmpanorenana no nametraka ahy eto, lalàmpanorenana koa no manala ahy eto.” Izay ny valin-tenin’ny Praiminisitra Ravelonarivo tamin’ny mpanao gazety teny Mahazoarivo, omaly, momba ny hoe […]
Eduardo Cue : «Voafetra ny filazan’ny gazety ny marina»
«Andraikitry ny gazety hisian’ny demokrasia », lohahevitra novelabelarin’i Eduardo Cue, mpanao gazety eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, sady mpikaroka momba ny asa fanaovan-gazety, nandritra ny valandresaka nataony tao amin’ny American center, omaly. Navoitrany tamin’izany ny asa fanaovan-gazety nandritra ny taonjato faha-19 tany Etazonia, teo ambany fifehezan’ny governemanta amerikanina. Efa nivoatra ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety taorian’izany raha jerena […]
Rabekijana Félix : “Aleo hofidin’ny vahoaka ny lehiben’ny faritra”
Mby aiza ny fanatanterahana ny fifidianam-paritra? Tsy ho tratra amin’ny volana jona… Iza no tokony hifidy ny lehiben’ny faritra? Maneho ny fijeriny ny filoha nasionaly vonjimaika eo anivon’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix: “Aleo hofidin’ny vahoaka ny lehiben’ny faritra. Satria masi-mandidy ny vahoaka, tompon’ny teny farany eo amin’ny fampandrosoana ny faritra misy azy.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): […]
« Précédent 1 … 1 308 1 309 1 310 1 311 1 312 … 1 395 Suivant »